Trump oo dib u dhigay xiliga ciidamada Maraykanka ka baxayaan Syria – Bandhiga
Trump oo dib u dhigay xiliga ciidamada Maraykanka ka baxayaan Syria
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in muddo 4 bilood ah dib loo dhigay xiliga ciidamada Maraykanka laga saarayo wadanka Siiriya, go’aankaasi oo uu bishii hore ku dhawaaqay ayaa waxaa si weyn uga horyimid xisbigiisa iyo Wasaarada Gaashaandhiga Maraykanka.
Go’aankan ayaa waxaa sidoo kale ka horyimid taliyayaasha Militariga Maraykanka ee ku sugan Siiriya iyo Ciraaq oo sheegay inay tilaabadan dib u dhac ku keeni doonto guulihii ay Maraykanka ka gaareen la dagaalanka ISIS oo ay gacan ka siinayeen xoogaga kurdida ee ku sugan waqooyig dalka Siiriya.
Waxaa isagu xilka iska casilay taliyihii Maraykanka u qaabilsanaa la dagaalanka ISIS ee Siiriya iyo waliba Wasiirkii Gaashaandhiga Maraykanka James Mattis oo isaguna si lama filaan ah xilka uga tagay.
Wadahadal dhexmaray qaar kamid ah Xildhibaanada Xisbi Xaakimka Jamhuuriga iyo Trump ayaa lagu sheegay in lagu heshiiyey in muddo 4 bilood ah lasiiyo ciidamada Maraykanka ee Siiriya oo aan halkaasi si deg degleh looga saarin.
Go’aanka cusub ayaa sidoo kale ku soo beegmaya kadib safarkii kadiska ah ee uu Trump todobaadkii hore ku tagay taliska Militariga Maraykanka ee Ciraaq, halkaasi oo ay saraakiisha ku sugan ka codsadeen in uu dib uga noqdo go’aankiisa.
Ka bixitaanka Maraykanka ee Siiriya ayaa waxaa horey usoo dhaweeyey Turkiga iyo Ruushka oo iyagu kala taageera dhinacyada ku dagaalamaya dalkaasi, Ruushka ayaa qorsheenaya in ciidamada Siiriya ee Bashar Al Assad la wareegaan qeybo kamid ah dhulka uu Maraykanka ka baxayo, halka Turkida laftoodu ay doonayaan inay awood u adeegsadaan Kurdida taageerada ka heli jiray Maraykanka.